महिला स्वतन्त्रताको पर्व - तीज बिशेष - साप्ताहिक
युग बदलियो, मानिसहरूको सोच बदलियो, समय र समाज परिवर्तन हुँदै गयो तर हाम्रा पर्व एवं संस्कृति जोगाउने र त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरामा हामी नेपाली अडिग छौं । यसभिक्रका केही त्रियाकलापमा परिवर्तन आए पनि चाडको चुरो भने यथावत् छ । पर्वको मर्मलाई मर्न नदिई समयसँगै परिवर्तन हुँदै जानु स्वाभाविक भएको समाजशास्त्री निर्मला ढकाल बताउँछिन् । उहिले र अहिलेको समय, मानिसहरूको पेसा–व्यवसाय तथा शैक्षिक, सामाजिक चेतनास्तरलाई उसैगरी दाँज्न मिल्दैन । चाडबाड मनाउनेमा मात्र नभएर हरेक कुरामा परिवर्तनको गति तीव्र छ । ढकाल भन्छिन्– ‘पहिलो कुरा त मानिसहरू शिक्षित र सामाजिक हुँदै गए, एक्सपोजर र आय बढ्न थाल्यो, जसले समाज परिवर्तनमा बलियो भूमिका खेल्न थाल्यो । लाउने, खाने, हिँड्ने, व्यवहार गर्ने, पर्व मनाउने कुरामा पनि त्यसको प्रभाव पर्दै गयो ।’ ढकालका अनुसार अहिलेका महिलाहरू हरेक कोणले सशक्त छन् । निर्णयको अधिकार, आर्थिक अधिकार, शैक्षिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार उनीहरूलाई राज्यले नै प्रदान गरिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरू स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो जीवनलाई कसरी खुसी राख्ने भन्ने छनोटमा जान सक्छन् । तुलनात्मक रूपमा सशक्त हुँदै गएको तीजका सम्बन्धमा केही विशेषज्ञको विषयगत धारणा :
जेण्डर इक्वालिटी एण्ड सोसल इन्क्लुजन एक्सपर्ट तथा महिला अधिकारकर्मी
स्वतन्त्रताको प्रयोग अनुकरणीय व्यक्तिहरुले अनुकरणीय ढंगले गर्नुपर्छ । महिलालाई भोग्यरुपमा प्रयोग गर्ने, महिलालाई प्रजननकै कारण छुवाछुत गर्ने र उनीहरुलाई सम्पत्ती कमाउने रुपमा प्रयोग गरिदै आएको । सोही क्रममा आज हरेक कुरा आवश्यकता भन्दा पनि लक्जरी तर्फ उन्मुख देखिन्छ जुन महिला स्वतन्त्रता र देशकै लागी राम्रो भइरहेको छैन् । यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ जसलाई हामी आफैंले नियमन गर्ने हो । महिलाको शरिर वस्तुको रुपमा देखाउने र देखिने कुरा होइन् यसैका कारण उपेक्षित र गरिबीकरण बढ्दैछ नसक्ने महिलाहरुमा । अधिकार प्रयोग गर्दा कर्तव्यको ख्याल गर्नुपर्छ । महिलाको प्रजनन अधिकार र क्षमतालाई कुण्ठित पार्न लाई उनीहरु आफैंलाई हेयका नजरले हेर्दै र शंका गर्दै तीज भन्ने पर्व शुरु गरियो, जुन प्रजनन् र महिनावारीसंग जोडिएको छ । ३ सय ६५ वटा दतिवन टोकेर रजस्वला हुंदा भुलवश छोइएको पाप नष्ट हुन्छ भन्ने गलत मानसिकता भरिदिएकै कारण हामी त्यसैमा जकडिएर किन बस्ने ? त्यसैलाई किन पछ्याउने ? जबकि महिनाबारी भनेको महिलामा हुने प्राकृतिक प्रकृया हो जुन भएन भने बच्चा जन्मिदैन् । गाउंगाउंमा आमा समुह गठन भइसकेको र गाउं प्रतिनिधी आइसकेको अवश्थामा यस्ता कुरा रुपान्तरित हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र हामी मानवका रुपमा स्थापित हुनेछौं । यस्ता गलत प्रथा र संस्कारबाट माथि उठेर नविन संस्कार तथा संस्कृति को शुरुवात गरौं । महिला दिवस, मानव दिवस मनाऔं , यसको सही सुचनालाई समुदायसम्म पुर्याऔं । संस्कारका रुपमा महिला माथिको हिंसाको अवशेषलाई निरन्तरता दिनु भन्दा नया संस्कार शुरुवात गरी नयां कामको सृजना गरौं ।
कुमारी खरेल, अधिवक्ता
कानुन एउटा संयन्त्र हो । जुन समग्र जनसंख्या, भूगोल, धार्मिक–सामाजिक अवस्था स्थिति हेरेर निर्माण गरिन्छ । पर्व मनाउने कुरामा यसले सबैलाई समान ढंगले बिनाभेदभाव समेट्नुपर्छ । हामी कुन समाजमा, कुन रीतिरिवाज र स्तरमा छौं भन्ने कुरा बुझेर यसको निर्माण एवं कार्यान्वयन जरुरी देखिन्छ । जहाँसम्म पार्टी वा समारोहमा निश्चित संख्यामा सहभागी हुने भन्ने कुरा छ, त्यो सामाजिक हित र आयोजना गर्ने व्यक्ति वा परिवारको आर्थिक भारलाई ध्यानमा राखी गरिएको कुरा हो । अन्यथा हरेक महिलाले आफ्नो वाक् स्वतन्त्रता, खुसी हुन पाउने अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् जुन हाम्रो मौलिक हकमै उल्लेख छ । गरगहना प्रदर्शन व्यक्तिको रुचि र इच्छाको कुरा हो । कोही आफूसँग भएर पनि प्रदर्शन गर्दैनन्, त्यसमा चाख हुनेले लगाउँछन् । यो वैयक्तिक विषय हो । तीजलाई महिला स्वतन्त्रतालाई प्रमाणित गर्ने ढंगले परिणाममुखी बनाउन सके यो वास्तवमै महिला हितका लागि हुनेछ ।
दुर्गा थापा, अर्थशास्त्री
म तीजलाई महिलाको आर्थिक पाटोसँग जोडेर हेर्न चाहन्छु । जति महिलाको आय बढ्दै गयो अर्थात् उनीहरू आर्थिक रूपमा सशक्त हुँदै गए, त्यति नै महिला निर्णायक क्षमता वृद्धि हुँदै जाने हो । पछिल्लो समय देखिएको महिला स्वतन्त्रता र उनीहरूको छनोट मुताविकका क्रियाकलाप त्यसकै परिणाम हो । महिलाले तीज मनाउने सन्दर्भमा कुरा गर्दा अहिले देखिएको ट्रेन्डलाई म गलत नै भनिहाल्न चाहन्नँ । एउटा व्यक्ति होस् वा परिवार अथवा संघ–संस्था नै किन नहुन्, मानसिक रूपमा तरोताजा र तन्दुरुस्त भए त्यसको परिणाम दोब्बर हुन्छ । एक वा दुई दिनको रिफ्रेसमेन्टले मानिसमा वर्षभरिलाई उत्साह, जाँगर एवं जोस थप्न मद्दत पुर्‍याउँछ । संघ–संस्थाले जहिले पनि आफ्ना कर्मचारीबाट कसरी ‘रेभेन्यु कलेक्सन’ गर्ने भन्नेतर्फ मात्र ध्यान नदिई कसरी उनीहरूलाई शारीरिक एवं मानसिक रूपमा खुसी र उत्साहित बनाएर त्यसको परिणाम संस्थाभित्र ल्याउने भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । तसर्थ संघ–संस्था तथा कार्यालयहरूले पनि महिला कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न तीज कार्यक्रम राख्न सक्छन्, जसले संस्थाको प्रगतिमा थप सहयोग त पुर्‍याउँछ नै, साथै कर्मचारीहरूले संस्थामा अपनत्व महसुस गर्न सक्छन् । संस्थाप्रति उनीहरूको लगाव बढ्दै जान्छ, जसले नाफाका लागि भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । यही कुरा पछि गएर मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनसँग जोडिन्छ । यही कुरा गृहिणीहरूमा पनि लागू हुन्छ । यदि गृहिणी भित्रैदेखि खुसी भइन् भने घर र परिवारप्रति उनमा थप जिम्मेवारी महसुस हुँदै जान्छ । अर्थशास्त्रले कमाएको पैसा थुप्राएर नराख, त्यसलाई पुनः लगानी गर भन्छ । पैसा कमाउने भनेको खुसी हुनकै लागि हो । कतिपय खुसी पैसाले किन्न नसक्ने हुन्छन् । महिलाहरू तीज मनाएर खुसी हुन्छन् भने त्यसलाई अनुत्पादक फजुल खर्च भन्न मिल्दैन । यद्यपि अर्काको देखासिकीमा ऋण काढेर सुनका गहना जोड्ने, सारी किन्ने, पार्टी गर्ने कुरा भने अनुत्पादक र फजुल खर्चभित्र पर्छन् ।
पूजा जोशी, व्यवसायी
आफ्नो गच्छेअनुसार खुसीपूर्वक तीज मनाउनु राम्रो कुरा हो । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ– ‘ह्याप्पिनेस इज च्वाइस, नट अ रिजल्ट ।’ भित्री इच्छाद्वारा गरिएका कार्यले मानिसमा खुसी ल्याउँछ । हामीले वर्षको एक दिन पनि खुसीपूर्वक आफूलाई मन लागेको कुरा गर्न नपाउने ? जतिसुकै धनी हुन् वा गरिब, पर्व मनाउने त एक दिन हो नि । हामी ३ सय ६५ दिनै पार्टी खाएर हिँडेका त छैनौं नि । कसैले कुन दिन त कसैले कुन दिन दर खाने कार्यक्रम राख्ने भएकाले पनि यो बाक्लो र ग्ल्यामरस देखिएको हो । हुनेले देखाउँछन्, नहुनेले देखाउँदैनन् । मेरो नि पुग्दो गरगहना छ तर म दर कार्यक्रममा सहभागी हुँदा, नक्कली झुम्का लगाएर जान्छु, यो मेरो इच्छा हो । म आफैं कमाउँछु, मेरो खुसीका निम्ति निर्णयको अधिकार म आफैंमा निहित हुनुपर्छ । आफैं कमाउने हो, आफैं रमाउने हो । जुन मेरो अधिकार पनि हो । मेरी आमा वा हजुरआमाको पालामा जस्तो अर्काका बारे चियो–चासो प्रचलन अहिले आएर घट्दैछ । हामी एकदिन रमाइलो गर्नेलाई सरकारले किन रोक्ने ? सरकार यस्ता झिनामसिना कुरामा अल्झनुभन्दा देशका मुद्दाहरूमा केन्द्रित होस् । भ्रष्टाचार रोकियोस् अनि मात्र सरकारको सफलता देखिन्छ । दर खान सरकारले पैसा दिएको छ र हामीलाई रोक्नलाई ?
सचिव, आसरा सुधार केन्द्र
तीजले महिलालाई एकत्रित हुन र सम्बन्ध बलियो बनाउन भूमिका खेल्छ । आम समय व्यस्त हुनेहरू पनि यो बेला एउटै थलोमा जम्मा भएर रमाउने, खुसी हुने, नाचगान गर्दै आफ्ना इच्छा प्रस्तुत गर्छन् जुन नेपाली संस्कारको अत्यन्तै सुन्दर र आकर्षक पक्ष हो । तीजकै नाममा घरभित्र मात्र सीमित चेलीले मनभित्र गुम्सिएका भावना व्यक्त गर्न पाउँछन् जसले उनीहरूको जीवनशैलीमा ऊर्जाशील हुन मद्दत गर्छ । तीजकै लागि भनेर किन नहोस्, नारीहरू नयाँ पहिरनमा सजिन पाउँछन् भने नेतृत्व तहमा बसेका महिलाहरूले महिलाका लागि फलदायी कार्यक्रम गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । तीजलाई नयाँ ढंगले मनाउने प्रचलन पनि बढ्दैछ । यो अवसरमा अहिले महिलाहरूले सामाजिक हितका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेका हुन्छन् । यसको प्रभाव भावी पुस्ता र समुदायमा समेत पर्छ । यस्ता कार्यले संस्कार र संस्कृति हस्तान्तरण एवं सामाजिक कार्यका लागि अरूलाई उत्प्रेरित पनि गर्छ ।
वर्षको एशियाकै सेक्सी महिला आलिया, दीपिका दशककै सेक्सी